ICP: Simba Kudzora Shandura uye ayo maitiro | Green Renewables
Kune nzira dzakawanda dzekuchengetedza uye kuverenga kwechiedza chatinoshandisa kumba. Imwe yacho ndeye ICP inozivikanwa sesimba rekudzora magetsi. Icho chigadzirwa chakaiswa mumba icho chinoshandiswa kucheka kuisirwa kana simba remagetsi rapfuura zvakange zvatorwa. Zvinowanzoitika kana huwandu hwakawanda hwemidziyo yemagetsi hwakabatana panguva imwe chete uye simba rakabvumirwa risingapunyuke kubva mukupa chinodikanwa chemagetsi.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve ICP simba rekudzora switch uye nehunhu hwayo.
2 Mashandiro anoita ICP
3 ICP inosungirwa here?
Iyi mhando yeanodzora system inogadzirirwa dzimba idzo vane pasi pegumi neshanu kW emagetsi. Isu tinoziva kuti kutemwa kweiyo halo kupa kunongova kwechinguvana sezvo kuchikwanisa kuwanikwazve kana iwe ukaona isu tichibatanidza magetsi emagetsi ayo anoita kuti chibvumirano chibvumirano chipfuure. Kana tangodzima midziyo yatange tichishandisa yakawandisa, magetsi anokwanisa kushandiswa zvekare senguva dzose.
Iyo ICP inowanikwa mune yakajairika control panel uko iyo yakasara yeiyo light system iripo. Mushandisi ane magetsi anofanirwa kuziva panowanikwa ICP nguva dzese. Kana simba rakabvumidzwa rikapfuura, chishandiso chinofanirwa kumiswazve zvakare kuti dzore magetsi emba. Kazhinji mhuri Ivo vanoziva iro simba rakabvumidzwa uye hazviwanzo kupfuura. Nekudaro, pane dzimwe nguva apo zvinoenderana kuti michina yakati wandei yakayamwa mune iyo inoshandisa yakawanda magetsi emagetsi panguva imwe chete uye inoita kuti otomatiki iende.
Kambani yekuparadzira munzvimbo yega yega iri kuchinja mamamita eanalogi edhijitari, izvo zvinoreva kuti ICP inosanganisirwa nemidziyo yemagetsi pachayo.
Mashandiro anoita ICP
Vanhu vazhinji vanonetseka zvekuita kana iyo ICP ichiramba ichisvetuka. Chinhu chakachengetedzeka ndechekuti inosvetuka ichienderera mberi kana iwe wabatidza mwenje uye usati wawana simba rakaringana rekupa midziyo yaunoshandisa kazhinji. Mune ino kesi, chinhu chakanyanya kurairwa ndechekuwedzera iro rakabvumidzwa magetsi emagetsi kudzivirira kuramba kuchicheka mukupa.
Mugoveri wemagetsi anotendera imwe shanduko yesimba rakatengwa pagore. Ndicho chikonzero ichi kuti isu tinofanirwa kuverenga zvakanyatsonaka kuti isimba ripi rakakodzera kwazvo kwatiri kuitira kuchengetedza zvakanyanya sezvinobvira pane bhiri remagetsi uye kupedza simba nemari. Mutengi iwe unofanirwa kuziva nguva dzese kuti iwe unogara uchizonyorera kune yakajairwa simba nemushambadzi. Kana iwe uchida zvimwe kana zvishoma, iwe unofanirwa kuchinja chirongwa chekuhaya.
Kana mushandisi achida kuwedzera chibvumirano chemagetsi emagetsi, anogona kubata chero mushambadzi mumusika anomupa yakachipa chiyero uye inoenderana nemamiriro ake. Isu tinofungidzira kuti isu tinoda kuwedzera simba redu remagetsi asi zvinhu zvishoma chete ndizvo zvakasvetuka ICP nenzira yakakodzera. Izvo zvinokwanisika kuti isu tinongofanirwa kuodha zvekare mashandisiro atinoita edu zvishandiso tisati tachinja kuenda kunoshandira iro rakakwira simba. Uye ndezvekuti hatisi kuzongochengetedza mari yemagetsi, asi zvakare tichave tichiburitsa shoma carbon dioxide mumhepo uye nekuderedza kushandiswa kwesimba.
Kuwedzera simba remagetsi remba kune mutengo. Izvo zvinofanirwa kunzwisiswa kuti mutengi anofanira kubhadhara iye anogovera munzvimbo yake iyo huwandu kuburikidza nemagetsi bhiri, inoenderana nekodzero dzinotevera:
Kodzero yekuwedzera 17,37€/kW + VAT
Kodzero yekuwana 19,70€/kW + VAT
Kodzero yekubatanidza € 9,04 + VAT
ICP inosungirwa here?
Kune mimwe misha isina ICP mavari kubvira nguva yapfuura zvaive zvisina kumanikidzwa. Pane mikana yakawanda yekuti izvi zviitike. Chimwe chazvo ndechekuti ICP haipo nekuti yanga isiri yekumanikidza uye imba yekare kana nekuti haudi kuti kupihwe kupihwa chero nguva. Chero zvazvingaitika, zvakakosha kuve nemudziyo uyu nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
Inodzivirira imba nekudzivirira kuiswa kwemagetsi kubva pakupisa zvakanyanyisa nekuda kwekushandiswa kwemagetsi akawanda panguva imwe chete.
Inochengetedza iyo yekumisikidza kana magetsi akundikana. Haingotidziviriri panjodzi kana moto ungangoitika, asi zvakare inotibatsira kuchengetedza kuisirwa kwese mune dambudziko kana pfupi pfupi.
Iyo yekuparadzira kambani inogona kuita chero zvipi kana iwe usina ICP mumba. Naizvozvi, inomanikidza kubhadhara mari yekuwedzera iyo inoratidzwa mumutemo wemagetsi pasi pechirango chekusavapo kweICP. Unogona kunge usina mudziyo uyu mumba mako kana sezvo iri imba yekare uye panguva iyoyo zvaisungirwa kuisa chishandiso kana iwe usiri kuda kuti mwenje uponeswe uye nerubatsiro rudimburwe.
Kana imba isina switch yekudzora magetsi, unogona kutumira mugove wako kuti aise kana kuzviita iwe pachako. Kana mita iri yerendi iri muparidzi ari kutarisira kuisa iyo. Kana iyo mita iri pane yako chivakwa, iwe unofanirwa kuiisa iwe pachako.
Zvichienderana nekuti isu tasarudza kuzviisa isu pachedu here kana kuti muparidzi atumwa, ichave nemutengo wakasiyana. Kana isu tichida kuiisa, tinofanirwa kuhaya yakaderera magetsi installer kana yekumisikidza kambani. Mutengo unoenderana nechiratidzo chemugadziri weICP. Kamwe chete kuti muparidzi aiswa, ndiyo inotarisira kuongorora uye kudzora chishandiso.
Imwe sarudzo inogona kubatsira ndeye kubvarura chishandiso. Izvo zvinoitwa kuburikidza nemugovera uye zvine basa rekuisa uye kuongorora. Mutengo wacho unosvika pa0.03 padanda.
Iyo nguva inotora kupasa kuongororwa pane chivakwa zvinoenderana nerudzi rwechivakwa. Chinhu chakasarudzika ndechekuti inoitwa makore ese gumi kuti uone kuti zvese zviri kufamba mushe. Izvo zvakare zvinoenderana nekuti nharaunda yenharaunda ine yakaiswa magetsi magetsi anopfuura 10 kW.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve ICP uye nehunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » ICP